2020-10-22 04-10 अभिमन्यु अभिजित
तस्वीर- हाम्राे विराटनगर
काेराेना अर्थात् काेभिड-१९ का कारण संसार ठप्प प्रायः छ । गत चैत दाेस्राे सातादेखि सुरु भएकाे नेपालकाे लकडाउन करीब सात महिनासम्म जारी रह्याे । जसमा अनेकाैँ अर्थतन्त्रका गतिविधि समेत ठप्प नै भए । काेराेनाकाे महामारी बढेसँगै नेपाफ सरकारले अर्थतन्त्र कमजाेर भएकाे भनी सीमित क्षेत्रका व्यवसायहरू सञ्चालनकाे अनुमति दियाे ।
नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० पनि मनाउँदै गर्दा प्रवेश गरेकाे महामारीले भ्रमण बर्षकाे मात्र अवशान गराएन सिङ्गाे पर्यटन बर्ष तथा हाेटल व्यवसायीहरूकाे लगानी र सपना पनि चकनाचुर बनाइदियाे ।
बिस्तारै केहि होला कि भन्ने सोच थियो । तर सरकारले साँझ ८ बजेपछि उता बन्द गर्न आदेश दिएकाे छ। यो कदमले सबैलाइ गाह्राे बनाएकाे छ। हाम्रो माग हामीलाई राती १० बजेसम्म व्यवसाय गर्न समय दिनु पर्यो ।
हाेटल तथा रेस्टुरेन्ट चलाएर देशकाे अर्थतन्त्रमा प्राण भर्नेहरूका लागि सरकारले कुनै चासाे दिएन । जसका कारण दर्जनाैँ हाेटलहरू सदाका लागि बन्द हुन पुगे भने कुनै बन्द हुने क्रममा छन् ।
प्रदेश १ काे प्रमुख शहर तथा राजधानीका रूपमा रहेकाे विराटनगरका हाेटेल रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूकाे अवस्था के छ त? उनीहरूले महामारीलाइ कसरी कटाए ? अबका दिनमा उनीहरू के गर्नेछन् भन्ने बारेमा हाम्राे विराटनगरले विराटनगरका केही हाेटेल व्यवसायीहरूका कुरा सुनेर प्रस्तुत गर्ने विचार गरेकाे छ ।
हाम्राे विराटनगरसँग कुराकानीका ह्यास ट्याग रेस्टुरेन्टका सञ्चालक अविनाश थापा लागि हुनुहुन्छ । वहाँसँग गरिएकाे अडियाे कुराकानीका अाधारमा तयार पारिएकाे याे संवादात्मक अंश-
१. सात महिनादेखि लकडाउनको समयमा पुरै ठप्प भएको तपाईंहरूको व्यवसाय अहिले कस्तो छ?
याे सात महिनाकाे अवधिमा सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाे त सबैलाइ थाहै छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय भने सरकारले लकडाउनको समाप्तिपछि पनि धेरै ढिलो खोलेको थियो। लकडाउन अवधिमा भने हाम्रो शून्य व्यापार भयो। लकडाउन सकिएपछि मानिसहरूको बजारमा केही आवतजावत भएपछि अहिले व्यापार केही हुन थालेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि केही मात्रामा सुरु भएको छ। यसप्रति आस पलाएको छ।
२. अब फेरि सरकारले राती ८ बजेपछि होटेल र रेस्टुरेन्टहरू नखाेल्न आदेश दिएकाे छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ??
यो कदम एकदमै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक कदम हो जस्तो लाग्छ। सबै काम सकेर साँझतिर हाम्रा ग्राहकहरू बढ्ने गर्छन्। किनभने दिनभर उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा व्यस्त हुन्छन्। फ्रेस हुन रेस्टुरेन्ट तथा होटेलमा खाना खाजाका लागि आउने ग्राहकको समयमै बन्द गरिदिनाले हामी मारमा परेका छौं। एक त लकडाउनको सिकार बन्न पुगेको होटेल व्यवसाय त्यहीमाथि सरकारको यो खालको अंकुशले साह्रै गाह्रो बनाएको छ। सरकारले सात महिनासम्म पनि अवहेलना गरेको होटेल व्यवसायमाथि नै यो खालको निषेधाज्ञाप्रति मेरो पूर्ण असहमति छ।
३. याे राती हाेटेल रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न केही चुनाैती अवश्य छन् । तपाइँहरूकाे विकल्प पाे केही छ कि?
अन्य व्यवसायहरूमा भीडभाड तथा सामाजिक दूरी कायम गरान नसकिने पनि छन्। उनीहरूको निश्चित समय दिउँसो सही पनि छ तर रेस्टुरेन्ट भनेको एक ठाउँमा बसेर खाना खाजा खाने ठाउँ हो। अरूका तुलनामा स्वास्थ्य मापदण्ड हामीमा पालना गर्नसक्ने आधार धेरै छ। गेटमै ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइज गर्ने तथा मास्क अनिवार्य गराएका छौं। मानिसको चहलपहल नै साँझमा बढ्ने हुँदा रेस्टुरेन्ट खोल्नका लागि समय सहज गरिदिनु आवश्यक छ। साँझमा भन्ने वित्तिकै रातैभर होइन तर यौटा निश्चित समय सीमा तोकेर हाम्रा लागि व्यवसाय सञ्चालनको अधिकार दिनु अति आवश्यक छ। कम्तिमा राती ९ देखि दश बजेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने सरकारसँग हाम्रो माग छ।
४. तपाइँहरूको रेस्टुरेन्टमा राती १०-११ बजे सम्म चल्ने व्पापार छ । सहजताका लागि हामीलाई यति समय र यस्तो नियम भइदिए सहज हुन्थ्याे भन्ने केही छ ?
यस बिषयमा हामीलाई स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकार र पर्यटनसँग सरोकार राख्नेहरूले चाँडै नै राती १२ बजेसम्म रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि काम गरिरहेको बताउँछन्। यसबारे उनीहरूले पटकपटक आश्वस्त पारेका छन् तर काम भएको छैन। होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा मानिसको चाप भनेकै रसाँझ परेपछि हुनाले यो समयमा बन्द गर्न बाध्यकारी नियम ल्याउनुले होटेल रेस्टुरेन्टप्रति सरकार अनुदार रहेको प्रस्ट हुन्छ। देशको प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको पर्यटन र पर्यटन सँगै आउने होटेल रेस्टुरेन्ट प्रतिको सरकारको यो खालको नियमले हामीलाई साह्रै गाह्रो भएको छ। यसको लागि पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गर्दछु।
चिफ किचेत रेस्टुरेन्ट महेन्द्र चाैकका केशव बुढाथाेकी भन्छन् -
सात महिनादेखि बन्द भएको हाम्रो व्यापार अहिले पूरै घाटामा छ । बीचमा खोल्न पाए पनि मान्छेहरु को भिड त्यति थिएन । अझ हामी सिमानाको नजिक भयेर पनि होला विराटनगर बाहिरका मानिस आउनै डराउँछन् । बीचमा १०-१५ दिन खोल्न दिएको थियो सरकारले तर मान्छेमा कोरोनाको त्रासले गर्दा होटेल रेस्टुरेन्टमा जान डराएका छन् । हामीले ७ महिना सम्म भाडा मात्र तिर्नु पर्यो तर आम्दनी चाहिँ केही छैन । बल्ल जसो तसो ऋण गरेर ३ महिना को भाडा तिरेका छाैँ । अझै ४ महिनाको बाँकी छ । अब त सायद बिस्तारै केहि होला कि भन्ने सोच थियो । तर सरकारले साँझ ८ बजेपछि उता बन्द गर्न आदेश दिएकाे छ। यो कदमले सबैलाइ गाह्राे बनाएकाे छ। हाम्रो माग हामीलाई राती १० बजेसम्मको समय दिनु पर्यो ।
« विराटनगर वरगाछीमा बि-स्योरको अत्याधुनिक ल्याब खुल्यो, पिसीआर जाँचका लागि सहज हुने
गाेकुल बाँस्काेटालाई कोरोना भाइरस संक्रमण »